Rabbi Moshe Rat - Rabbi Michael Avraham ၏ စံပြအယူအဆ
အရှင်ဘုရား မိုရှေ ကြွက်၏ စံပြဝါဒ
တုံ့ပြန်မှု > အမျိုးအစား- ဒဿနိကဗေဒ > အရှင်ဘုရား မိုရှေ ကြွက်၏ စံပြဝါဒ
ကိုဘေး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက မေးတယ်။
Moshe Rat ထောက်ခံတဲ့ စံနစ်တကျ စံနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းဘယ်လိုထင်လဲ မေးချင်တယ်၊
သူတင်ပြသည့် စံပြကမ္ဘာအမြင်တွင် လက်တွေ့ဘဝအားလုံးသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ အလွန်သိစိတ်မှ ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ ထွက်လာသည့် လူ့အသိစိတ်၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စောဒကတက်သည်။
တစ်နည်းဆိုရသော် လက်တွေ့ဘဝသည် ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ထဲတွင် တည်ရှိနေသည့် အိပ်မက်တစ်မျိုးသာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ဘဝသည် လူသားအားလုံး၏ မျှဝေထားသော အိပ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပေ။
1. ၎င်းသည် ကွမ်တမ်မှ လေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံသည် (တိုင်းတာမှုအပေါ် စောင့်ကြည့်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်သည်)။
2. ရူပဗေဒ ပညာရှင်များကဲ့သို့ပင် ရုပ်၏ တည်ရှိမှုအစစ်အမှန်ကို ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ အားလုံး မအောင်မြင်ဘဲ ဖြစ်နေလျှင် တစ်ခုတည်းသော အဖြစ်မှန်မှာ ဝိညာဏ်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
ထို့အပြင်၊ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှု လျော့နည်းလာပြီး မသန်စွမ်းသည့် အခြေအနေများတွင် - လူများသည် သာမန်အခြေအနေထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သိမြင်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို တွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။
ဥပမာ- သေလုမျောပါး အတွေ့အကြုံများ သို့မဟုတ် အချို့သော ဆေးဝါးများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်။ ထိုနည်းအားဖြင့် မူလမသိစိတ်၏ အခြေအနေသို့ ချဉ်းကပ်လာသည်။ ပို.
4. ထို့အပြင်၊ ဤချဉ်းကပ်မှုအတွက် အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသောကြောင့် ၎င်းကိုယုံကြည်သင့်သည်ဟု သူငြင်းဆိုသည်မှာလည်း ရိုးရှင်းပါသည်။
5. လက်တွေ့ကျသောကမ္ဘာ့အမြင်သည် နုံအတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလယ်ခေတ်ကမ္ဘာ့အမြင်ကို စွဲလမ်းနေမည့်အစား၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒ၏ တိုးတက်မှုဆီသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
(သူ့မှာ ငြင်းခုံစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် တကယ်ကို သူတို့အားလုံးမှာ မဖော်ပြထားဘူးထင်တယ်)။
ဤချဉ်းကပ်မှုများအပေါ်အခြေခံ၍ အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြရန် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကို တည်ဆောက်သူများ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
ကာစထရိုနည်းလမ်းအရ ဦးနှောက်သည် "ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိစိတ်သည် ပြင်ပမှ အကဲခတ်သူအား ရှုမြင်ပုံ" ဆိုပါစို့။ စိတ်နှင့်ဝိညာဏ်သည် မတူညီသော အရာနှစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း စိတ်သည် အသိစိတ်၏ မြင်သာထင်သာမြင်သာသော ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။
မေးခွန်း tags: စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒ, မိုရှေ ကြွက်, ကက်စထရို
မီကင်း ဝန်ထမ်း လွန်ခဲ့သော7လကဖြေဆိုခဲ့သည်။
အရှင်ဘုရား Moshe Rat သည် ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ကို ကျွန်တော် အသေအချာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ သဘောထား တော်တော်များများကို ကျွန်တော် မမျှဝေပါဘူး။ ဤနေရာတွင် သူ၏အမည်ဖြင့် သင်ရေးသားခဲ့သော ငြင်းခုံချက်များ (အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်မဖတ်ရသေးပါ) ၎င်းတို့၏ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အခြေခံများအပါအဝင် ကျွန်ုပ်အတွက် လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိဟု ထင်ရသည်။
လက်တွေ့ဘဝဆိုတာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသိစိတ်မှာ ရှိနေတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလို့ ဆိုထားချက်က ကျွန်မအတွက်တော့ တကယ့်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်က ဘယ်သူလဲ။ ငါ့လား? ဆိုလိုတာက ငါရှိနေတာလား။ ငါတစ်ယောက်ထဲရှိနေတာလား။ ငါတစ်ယောက်ထဲရှိနေတယ် တခြားသူတွေဘာကြောင့်မရှိဘူးလို့ယူဆတာလဲ။ ကျန်တဲ့ အဖြစ်မှန်တွေကရော မဟုတ်ဘူးလား။ ဘုရားသခင်လည်း ရှိသလား။ သူဘယ်လိုသိလဲ။
“သိပ္ပံနည်းကျ” အခြေခံအရတော့ ကွမ်တမ်နဲ့ ဆက်စပ်မှုဟာ ဘာလဲဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ လက်တွေ့ဘဝအပေါ် တိုင်းတာခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ခက်ခဲသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပိုင်းခြားထားကာ ယနေ့ခေတ်တွင် "တိုင်းတာခြင်း" သည် လူသားတို့၏ သိမြင်မှုမလိုအပ်ကြောင်း (ကွန်ပြူတာမှ တိုင်းတာခြင်းပင်လျှင် လှိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပျက်စီးစေသည်)၊ နာမည်ကြီးစာပေများတွင် ပြီးတော့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက။
ကိုဘေး လွန်ခဲ့သော7လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
သူ့တောင်းဆိုချက်တွေအားလုံးထဲမှာ ကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူး၊ အဲဒါတွေကို အတိုချုံးပြီး ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှထဲကပဲ၊ သူ့ဇာတ်ကြောင်းဆိုက်မှာ နောက်ထပ် တောင်းဆိုချက်အနည်းငယ်ရှိပါသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် သူကတော့ တခြားလူတွေ ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။ သို့သော် အိပ်မက်ထဲတွင် မည်သူမဆို ဤကဲ့သို့ အိပ်မက်မက်နိုင်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးတွင် အသိစိတ်များသည် အသိစိတ်တစ်ခုဖြင့် အတူတူ မက်ကြသည်။ ကွန်ပြူတာဂိမ်းတစ်မျိုး၏ ဥပမာတစ်ခုသည် သူ၏စကားများကို ကောင်းမွန်စွာ သရုပ်ဖော်နိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ လက်တွေ့ဘဝသို့ လောကုတ္တရာ ချဉ်းကပ်မှု နှင့် ပေါင်းစည်းသော ချဉ်းကပ်မှုဟုလည်း ကျွန်တော် ထင်မြင်တတ်သည်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် နည်းနည်းခက်တာက ဘာလဲ၊ ဒီဘာသာရပ်ကို ဘယ်လိုဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ ထင်လဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုကိစ္စတွေမှာလား။
ပါတီများကို ဤနေရာသို့ မည်ကဲ့သို့ အတိအကျ ယူဆောင်နိုင်မည်နည်း။ ကောက်ချက်ချပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ Kant အရ ၎င်းကိုယ်တိုင် (Nuumana) နှင့် အမှန်တကယ်စကြဝဠာတစ်ခုတည်ရှိခြင်းအတွက် အထောက်အထားမရှိကြောင်း လူတိုင်းသိသာထင်ရှားပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်သာ အမြဲဆုံတွေ့နေရသည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုမှလွဲ၍)… သို့ဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် အရာနှစ်ပါးနှင့် ဖြစ်ရပ်ဆန်းများသာ အလုပ်လုပ်သည်ဟု မယူဆသနည်း။ (ဒီမှာ ရှိရင် Oakham သင်တုန်းဓား လိုမျိုး)
မင်းရဲ့မေးခွန်းဟာ ယေဘူယျသံသယစိတ်တွေ တက်လာပြီး ဗီရိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လျှောစောင်းတစ်ခုကနေ ငါမြင်ဖူးတယ်။
သို့သော် သံသယချည်းကပ်ခြင်းမဟုတ်၊ လက်တွေ့လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သောကြောင့် ဤနေရာသို့ တက်လာရမည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေ။
ငါက ဆန့်ကျင်ဘက်မေးမယ် ၊ ရဗ္ဗိက ဘာလို့ dualism လို့ ယူဆသလဲ ၊ တခြားလူ ရှိတယ် ၊ G-d ရှိတယ် ၊
သူ့ပုံသဏ္ဍာန်က ဒီလိုပဲ ထင်ပါတယ်။ သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိသလို ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ သူ့ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ ခံစားချက်တွေ မရှိဘူးလား။ သို့သော် ဤအရာများအတွက် အပြည့်အဝရှင်းလင်းချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသော ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ အယူအဆသည် * အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် * / အခြားရွေးချယ်စရာ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့် တူသောကြောင့် သံသယဖြစ်စရာမလိုတော့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဒါက မှန်ကန်တဲ့ အရေးဆိုမှုလို့ မင်းထင်မလား။ (နောက်ဆုံးတော့ ငါတို့ရှေ့မှာ စားပွဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလို့)။
ကော်လံ 383 တွင် သင်ဖော်ပြခဲ့သော Bohrs သည် နာမ်မပါသောဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် နာမ်မပါသောဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့် (အခြားသူများမှလွဲ၍) ကြိယာများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဖောက်ပြန်မှုများသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခု၌ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာဝတ္တုများကို ရှိပြီးသားအဖြစ် ဆက်ဆံပုံရသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုလျှင် အပေးအယူသည် သဟဇာတဖြစ်ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိပုံရသည်။
နောက်ဆုံးခုံသမာဓိ လွန်ခဲ့သော7လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် စကားများအစား မြင့်မားသော အမိုးလက်ရန်းကို နင်းကာ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေပြီးနောက် အိပ်မက်မှ နိုးထလာခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ် သူ့အိပ်မက်ထဲက ဆွဲငင်အားကို ချေဖျက်ဖို့ ဂရုစိုက်ပြီး လေထဲမှာ လွင့်နေတဲ့ အိပ်မက်ကားတွေကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
မီကင်း ဝန်ထမ်း	လွန်ခဲ့သော7လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ဤစကားလုံးများကို နားမလည်ပါ၊ ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဆွေးနွေးရမည်ကို သေချာမသိပါ (ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်သည့်အချက်ကိုမျှ မမြင်ပါ)။
ကြန့်ကြာမှုအတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော် အရမ်းအလုပ်ရှုပ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးချင်တာပါ။
ဒီစာကြောင်းမှာ အမှတ်အရေအတွက် နားမလည်ဘူး။
1. ပထမဦးစွာ စကားလုံးများ၏ နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းဆီသို့။
ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ "သညာ" သာဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်သောကြောင့် ထိုအယူအဆကို ရဗ္ဗိနားလည်နိုင်ပါသလား။ ထို့ကြောင့် အခြားသူများမှလွဲ၍ တည်ရှိနေသမျှ အရာအားလုံးသည် "ကျွန်ုပ်တို့၏" ခံယူချက်၌သာ ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာတစ်ခု၏တည်ရှိမှု သဘောတရားကို ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ~ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဤနေရာ၌သာ မျှဝေထားသော အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ထို့ကြောင့် ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဖြစ်မှန်ကို ရှင်းပြရန် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
တစ် စားပွဲတစ်လုံးကိုမြင်ရပြီး ကျွန်တော့်အတွက် အပြင်ပန်းမှာ “ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း” ရှိပါသည်။
ခ စားပွဲတစ်လုံးကို မြင်နေရပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒါဟာ ငါ့အသိစိတ်ထဲမှာသာ ရှိပြီး အပြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Gd လို့ ဆိုကြပါစို့။ ဒါမှလည်း လူများများမြင်လာနိုင်အောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ကွန်ပြူတာပေါ်ရှိ ပူးပေါင်းစစ်ကစားနည်းတစ်မျိုး။
သို့ဆိုလျှင် “မှန်ကန်သော” ရှင်းလင်းချက်ကို မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်မည်နည်း။
နောက်ဆုံးတော့၊ A. လို့ ပြောကြတဲ့ အချို့သော etuities တွေအရ ဒီလိုကမ္ဘာကြီး တည်ရှိနေတာပါပဲ။ B. ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးပေမယ့် ခံယူချက်နဲ့ အမြဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။
တူညီသောဒေတာကိုရှင်းပြပါက ရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်ကို ရွေးချယ်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရပြီး B ကိုရွေးချယ်ရကျိုးနပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာ လုံးဝမှန်တယ်လို့ ငါ့အတွက်တော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ အများစုမှာ နည်းစနစ်ပိုင်းအရ၊ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ လူအများစုက A လို့ ထင်ကြတယ်။
သို့ဆိုလျှင် ဤကိစ္စကို ဆွေးနွေးရန် မည်မျှ သင့်လျော်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ရှိပါသနည်းဟု ကျွန်ုပ်မေးပါသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ရဗ္ဗိသည် မည်သို့ဆွေးနွေးရမည်ကို မသိပါက အရှင်ဘုရား မိုရှေသည် မှားသည်ဟု အဘယ့်ကြောင့် ထင်သနည်း၊
3. ဤဆွေးနွေးမှုတွင် အဘယ်ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိသနည်း။ အဲဒါကို မဆွေးနွေးနိုင်လို့လား (ဒါဆိုရင် ဒီချဉ်းကပ်မှုရဲ့ "အမှား" အကြောင်း ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ သို့မဟုတ် NFKM မရှိသောကြောင့် (သို့သော်၎င်းသည် မတိကျသော်လည်း၊ ဤနည်းလမ်းကို ထောက်ခံသူများဆိုသည်အတိုင်း ဖြစ်တည်မှုဝါဒီနှင့် ဒဿနအဆင့်တွင် များစွာရှိသည်)
4. ပင်မပစ္စည်းသည် အမှန်တကယ် နယ်ပယ်များဖြစ်သောကြောင့် အထောက်အထားမျိုးစုံကို ယူဆောင်လာနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ထူးဆန်းစွာ ပြုမူနေသည် (ဥပမာ အလင်း၏အလျင်ထက်မြန်ခြင်း၊ အနန္တအမြန်နှုန်း၊ သဘာဝတရား၏ ပြင်ပဥပဒေများကို ပြသသော စွဲချက်ထိန်းသိမ်းမှု၊ စသည်ဖြင့်)။ ၎င်းတို့သည် စစ်မှန်သော အရာဝတ္ထုများအဖြစ် မတည်ရှိသော်လည်း "အလားအလာ" သို့မဟုတ် နယ်ပယ်အဖြစ်သာ တည်ရှိနေပါသည်။ ဒါတောင်မှ လက်တွေ့မှာ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိသေးတယ်။ ဒီထဲမှာ ဘုရားသခင်ကို ရှာတွေ့တဲ့ သူတွေလည်း ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ နယ်ပယ်များ သို့မဟုတ် သဘာဝနိယာမများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မျှဝေထားသော အသိစိတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဤနေရာတွင် နောက်ထပ် ခြေတစ်လှမ်းကို လှမ်းကြည့်ပါ။
ကြန့်ကြာမှုကို ခွင့်လွှတ်ပါ၊ သို့သော် အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့သည့်အရာများကို ထပ်တလဲလဲလုပ်နေသောကြောင့် ဆွေးနွေးရန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျွန်တော် အတိုချုံး ဖြေပါ့မယ်။
1. စကားလုံးတွေကို နားမလည်လို့ ရှင်းပြတယ်။ ဘာမှမရှိရင် ငါလည်းမလုပ်ဘူး။ ဒါဆို ငါ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာ ဘယ်သူ့စိတ်ကူးထဲမှာပါလဲ။ ငါ့လား? ငါရှိနေတယ်၊ ​​ကျန်တာတွေချည်းသာမရှိဘူးလို့ မင်းပြောရင် မင်းဘာတွေရခဲ့လဲ။ တစ်ခုခုရှိနေပြီဟု ယူဆပါက အခြားအရာများလည်း ရှိနေကြောင်း ထပ်ထည့်ရန် အကြောင်းမရှိပေ။ နောက်ဆုံးတော့၊ ဒါက ငါတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ပဲ။
2. မှန်ကန်သော ရှင်းပြချက်သည် ကျွန်ုပ်၏ အလိုလိုသိပုံရသည်။
၃။ အမှန်ကတော့ ဆွေးနွေးလို့မရဘူး။ ဤနေရာတွင် အမှန်တရားမရှိဟု မဆိုလိုပါ။ ဤစိတ်ကူးယဉ်ဝါဒသည် ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် မမှန်ပါ၊ ဆွေးနွေး၍မရပါ။ ဒိဋ္ဌိ၏ နိယာမသည် ကျွန်ုပ်၏ အမြင်အရဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဆွေးနွေးရန် သို့မဟုတ် လက်မခံသူများကို သက်သေပြရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
4. ရူပဗေဒနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။ ရူပဗေဒ ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုများ တည်ရှိခြင်း မရှိဟု ဆိုထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထင်မြင်သည့်အရာ မဟုတ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) တိကျမှု မရှိဟု ဆိုသည်။
ဒီပဟေဋ္ဌိတွေဟာ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်သလို ဒီဆွေးနွေးမှုမှာ ဘာအချက်မှ မတွေ့ပါဘူး။
ဆေးခြောက် လွန်ခဲ့သော7လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
၁။ အခြားလူများ တည်ရှိနေကြောင်းကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သဘောမတူသောကြောင့် လုံးလုံးလျားလျား မမှန်ဘဲ အသိဥာဏ်မဟုတ်သော ပြင်ပအရာများ၏ တည်ရှိမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်သာ အမှားဖြစ်သည်။
2. ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်၊ ဤအမည်သာလျှင် ထပ်လောင်းတောင်းဆိုမှုများပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ကနဦးအစပျိုးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဆိုပါက နားလည်ပါသည်။ ဒဿန အထောက်အထား တစ်မျိုးအနေနှင့် Gd ကို ဖော်ထုတ်သည်။
3. ကောက်ချက်ဆွဲပြီး သမာဓိနှင့် မောဟ၌ ညီညွတ်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။ ဒါပမေယျ့၊ စကားလုံးအသုံးအနှုနျးတှကေို တကယ်ပဲ စိတျဝငျစားတယျလို့ ပွောဆိုထားတယျဆိုရငျကော အဘယျသို့ထင်ပါတယျ။ အထွေထွေဆွေးနွေးမှုများတွင် ...
4. ကောင်းပြီ၊ ဒါက လူကြိုက်များတဲ့ စာပေတွေမှာ အများကြီးတက်လာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီဆိုက်မှာလည်း အခါအားလျော်စွာ တက်လာပါတယ်၊ အဲဒါကို ဘာသာရေးသမားတွေကလည်း တခြား ဦးတည်ချက်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒီတွေက တခြား ဦးတည်ရာတွေမှာ သုံးနေကြပေမယ့်၊ နာရာလီကိုယ်တိုင်က မေးခွန်းထုတ်စရာလိုတယ်။
1. သင်ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တခြားသူတွေရှိလား။ ဇယားတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တည်ရှိမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တိုက်ရိုက်အချက်အလက်တွေ သင့်မှာရှိပါသလား။
၃။ စကားအပြောအဆိုတွေအကြောင်း နေရာတော်တော်များများမှာ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဤအရာများသည် ဆန်းစစ်ရန်နည်းလမ်းမရှိဟု ဆိုကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့အား ခိုင်ခံ့စေသော မည်သည့်အငြင်းအခုံကိုမဆို တူညီသောနည်းဖြင့် ငြင်းပယ်လိမ့်မည် (ဒါက ကျွန်ုပ်၏ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နိုင်သည်)။ ဒါကြောင့် ဒီဆွေးနွေးမှုမှာ ဘာသဘောမှ မတွေ့ဘူး။
1. အများအားဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို အခြေခံ၍ စောဒကတက်နိုင်သည်ဟု ထင်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ တကယ်​ရှိ​နေတဲ့ စားပွဲ​က​တော့ ဒီလိုပဲ​ပြောပါ။
၂-၃။ ကျေးဇူးပါ။ အခု ငါနားလည်ပြီ။
4. ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာနှင့် သိပ္ပံပညာနှင့် ဒဿနိကဗေဒနှင့် ဓမ္မပညာတို့ကြား ဆက်နွှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်တော်မေးလိုသည်မှာ ဘာသာရပ်အပေါ် တစ်စက်တစ်စက်သာ အရင်ပြောလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စာပေနှင့် လူကြိုက်များသော စာပေများတွင် အလွန်အသုံးများသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌ မင်းရဲ့ဖော်ပြချက်တွေဟာ အတော်လေး အံ့သြစရာကောင်းပေမယ့် (ခေတ်သစ် ရူပဗေဒပညာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရိပ်မိတဲ့အရာတွေက အမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်သည်)။ အကယ်လို့ ငါက မင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို လုံးဝ ဖယ်မပေးခဲ့ရင် 🙂
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဒီကော်လံအတွက် လုံလောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် သင်က ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။
ဆောက်လုပ်ရေး ဂရန် Lehavah သည် လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလား။ (၄၈၄)၊
ဘာသာရေး Zionism နှင့် ultra-Orthodoxism အကြား ခြားနားချက် ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
Henri Bergson ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)